Blog of Nyein Chan Yar: Why do you hate Muslims ?
This post was originally posted on 28 April 2012. Re-posted now after my broken blog was restored.
ဒီရက်ပိုင်း လုံးဝ စိတ်မပျော်ဘူး။ နိုင်ငံထဲမှာ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်တွေက အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကို တိုက်ခိုက်တယ်။ တော်တော်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဒါလေးကို facebook မှာ ရေးဖြစ်တယ်။ ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များကို ဦးတည်ရေးသားအပ်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါအုံး။
စာရေးဆရာတစ်ယောက် ပြောတာ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်တဲ့ အစိုးရတွေဟာ ပြည်သူလူထုက သူတို့ကို အားကိုးယုံကြည်လာအောင် လူမျိုးခြား မုန်းတီးရေး ကိုဦးတည်တဲ့ အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေးဝါဒကို သွတ်သွင်းလေ့ရှိကြတယ်တဲ့။ ပြီးရင် လိုရင်လိုသလို လူမျိုးရေး- ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း ဖန်တီးပြီး နိုင်ငံရေး အာရုံပြောင်းအောင် လုပ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကစလို့ ဒီနေ့ထိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ နဲ့ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကို ရန်တိုက်ပေးတဲ့ နည်းကို ကျင့်သုံးနေတာ အထင်အရှားပါပဲ။ ရလဒ်ကတော့ လူနည်းစုဖြစ်တဲ့ မူစလင်တွေသာ မြေစာပင်ဖြစ်ရတာ အမြဲပါပဲ။ လူနည်းစုကိုစွတ်စွဲပြီး မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက်တာကတော့ အင်မတန်သေးသိမ်တဲ့ လုပ်ရပ်ပါပဲ။ (သတိရတာလေးတခု ပြောရရင် ဆူနာမိကာလ ထိုင်းနိုင်ငံကမ်းခြေက မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို ပစ္စည်းတွေ ခိုးနေတဲ့လူတွေ လို့စွတ်စွဲတာ သတင်းတွေထဲပါလာတော့ မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက်ကြလေတယ် ဆိုပြီး ပြောခဲကြသေးတယ်လေ။ ) အဲ့တော့ ပြောရရင် ဒီ extreme nationalism ဆိုတာ racism ကိုပဲ ဦးတည်ပါတယ်။ အစိုးရက ဖန်တီးသွေးထိုးထားတာ လူအများစုက သူတို့ကို အားကိုးလာအောင်၊ ကိုးကွယ်လာအောင် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲ။
အခုလက်ရှိကိစ္စကို ပြောရရင် ပထမတစ်ခုက ကံမမြို့ကကိစ္စ သတင်းထဲမှာရေးထားတာက…
ယခင်နှစ်များစွာကတည်းက ပြိုင်ဘက်မရှိ စက်လှေလိုင်စင်ရနေသည့် ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနှင့် နီးစပ်သူများထံမှ ယခုနှစ်တွင် ဟာဂျီမ ဒေါ်ဝါ၀ါက အဆိုပါလိုုင်စင်ကို ၃၂၇ သိန်းဖြင့် လေလံအောင်ခဲ့ရာမှ စတင်မြစ်ဖျားခံခြဲ့ခင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “စက်လှေတွေကို ဒီနှစ်ဧပြီ လဆန်းပိုင်းကစပြီး ဆွဲခွင့်ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူတို့က တစ်ပတ်လောက် သူတို့ကိုငှားပါဦးဆိုလို့ အငှားပေးလိုက်ရတယ်´´ဟု ဟာဂျီမဒေါ်ဝါ၀ါနှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်သူတစ်ဦးက ပြောကြား သည်။ ထိုသို့စက်လှေကို ကြံ့ခိုင်ရေးက နောက်ခံပေးထားသည့် ဦးဝမ်းတို့က ရက်ပြည့်သည့်နောက်တွင် ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းမရှိဘဲ ယခုအခါ လေလံဖိုးငွေပြန်ပေးရန် သိမ်းယူထားလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ “ဆက်မငှားဘူးဆိုတော့ ငါတို့ကို စက်လှေလိုင်စင်ပြန်မပေးရင် ကုလား-ဗမာ အဓိကရုံးဖြစ်သွား မယ်လို့ ကံမမြို့နယ်၊ ကြံ့/ဖွံ့ပါတီမှ အမတ်ဦးဝင်းနိုင်ကပြောတယ်´´ဟု အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကပင် ဆက်လက် ပြောကြားသည်။ ထို့ကြောင့် ဟာဂျီမ ဒေါ်ဝါ၀ါက စက်လှေလိုင်စင်လေလံဖိုးငွေနှင့် အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်တန်ဖိုးဖြင့် စက်လှေလိုင်စင်ကို ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသည့်သူများထံသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ရ သည်။
ဒုတိယတစ်ခုက ဖားကန့်မြို့နယ် ဆိုင်းတောင် ကျေးရွာမှာ… facebook user တစ်ယောက်ရေးထားတာက–
လွန် ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ လောက်က စတင်ပြီး ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဗလီလို့ဆိုရင်လည်း မမှားဘူး။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ၇၀၀ လောက်ရှိတဲ့ ဆိုင်းတောင်မှာ ဘုရားဝတ်ပြုသူ ၄၀၀ လောက်ရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ လူဦးရေ ၁၅၀ လောက်သာဆန့်တဲ့ ဗလီကို ချဲ့ထွင်ဖို့ကြိုးစားရာမှ ပြဿနာကစတင်လာပါတော့ တယ်။ ဆိုင်းတောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုတိုင်ကလည်းအစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဖြစ်နေပြန်တော့ ပြဿနာကပိုပြီးရှုပ် ထွေးလာတယ်။ ဆိုင်းတောင်ဒေသခံတွေနဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတချို့ အထက်ကို အကြိမ်ကြိမ်စာတင်ပေမဲ့လည်း ထူးခြားမှုမရှိလာဘူး လို့သိရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဖားကန့်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဆိုင်းဘုတ်ဖြုတ်ပေး ဖို့ကစ္စနဲ့ အခန်းဟောင်းဖြုတ်ပေးဖို့ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုလာတယ်လို့သိရတယ်။ ဒီလ ၇ ရက်နေ့ကစပြီး ဝတ်မပြုရဘူးဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လည်း လာချိတ်သွားတယ်လို့သိရတယ်။ နောက်ဆုံးမတော့ ၁၃ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီလောက်မှာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်း တော်ကြီး ၅ ပါးနဲ့ သံဃာအပါး ၁၅၀ ခန့်က ဗလီကျောင်းဝန်းကို စတင်ဖြိုဖျက်ဖို့ကြိုးစားလာပါတော့တယ်။ ထိုအချိန်မှာ ဆိုင်းတောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး က “အရှင်ဘုရား ကျွန်တော်တို့ မနက်ဖြန်ခါဖျက်ပေးပါ့မယ်” လို့ ပြောပေမဲ့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးတပါးက “ကုလားပါးစပ်က အရှင်ဘုရားလို့လဲမခေါ်နဲ့၊ ကုလားပါးစပ်က မနက်ဖြန်ဖြုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကတိကို လည်းမယုံဘူး” ဆိုပြီး တုန့်ပြန်တာကိုပြန်ကြားမိလိုက်ပါတယ်။ နာရီပိုင်း အတွင်း လာကြည့်တဲ့ပြည်သူ ၃၀၀၊ ၄၀၀ ခန့်ရှိသွား ပါတယ်။ လက်သမားတွေကို ခေါ်ပြီးဖျက်ခိုင်းတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ ည ၉း၀၀ နာရီလောက်ရောက်တော့ စစ်ကြောင်း တစ်ခုက ဖြန်ဖြေရမဲ့အစား လုံခြုံရေးယူပေးနေတာကို မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ စိတ်ကြိုက် ဖျက်ပြီးတော့ အချိုရေတွေ၊ ရေသန့်ဘူးတွေတောင် အလှူလုပ်ပြီးပျော်ရွှင် နေတာကို ဝမ်းနည်းစွာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အသက် အန္ဒရာယ်စိုးရိမ်ပြီး မိသားစုလိုက် ထွက်ပြေးနေတဲ့ မိသားစု တွေကိုလည်း စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ငေးကြည့် မိပါတယ်။ မတရားမှုပြုကျင့်နေတာကို သိပါလျက်နဲ့ အားပေးနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ၊ အစိုးရအာဏာပိုင်တွေ၊ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို စာရေးသူနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါ။
ကဲ… စစ်တပ်ကလာပြီး ဗလီဖျက်တဲ့သူတွေကို လာပြီးကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတာ ဘာသဘောပါလဲ။ ဒီပြဿနာကို စတင်အောင် ကျောင်းထိုင်ဘုန်း တော်ကြီးတွေကို ကြံ့ဖွံ့ သို့မဟုတ် စစ်တပ်က ကြိုတင်သွေးထိုးပေးခဲ့တာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
နောက်ထပ်ကျနော် စဉ်းစားစေချင်တာတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာလို့ အစ္စလမ် ဘာသာဝင်တွေကို အသားလွတ် မုန်းနေကြတာလဲ ဆိုတာပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အများစု ကိုးကွယ်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာအပြင် ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာနှင့် နတ်ကိုးကွယ်မှုဘာသာ ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ ကဲဒီမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာကတော့ တိုင်းရင်းသားတွေ ကိုးကွယ်ကြတာက တစ်ကြောင်း လူတိုင်းအထင်ကြီးတဲ့ အနောက်နိုင်ငံရဲ့ ဘာသာတရား ဖြစ်တာက တကြောင်း ခရစ်ယာန်ကို မမုန်းကြဘူး။ အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ မှာ နှစ်မျိုးလုံးက အိန္ဒိယ နွယ်ဖွားတွေ ကိုးကွယ်တယ်ဆိုပြီး လူမျိုးရေး ပါလာတယ်။ ဒီမှာ အိန္ဒိယ နွယ်ဖွားတွေချင်း အတူတူ ဟိန္ဒူတွေကို မမုန်းကြဘူး ဘာလိုလည်းဆိုတော့ သူတို့က ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပါ တစ်ပြိုင်တည်း ကိုးကွယ်လို့။ (တကယ်ဆို မြန်မာ သမိုင်းမှာ လူတွေမုန်းခဲ့တဲ့ ချစ်တီးကုလားဆိုတာ ဟိန္ဒူတွေပါ။ မူဆလင်တွေဟာ ငွေတိုးချေးရင်ကို အပြစ်ကြီးပါတယ်။ ဒါ… ဟိန္ဒူတွေကို မုန်းပါလို့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဂျပန်တွေကို မမုန်းသလို သူတို့ကိုလည်း မုန်းစရာမလိုဘူး။)။ နောက်ဆုံး အိန္ဒိယနွယ်ဖွား ဖြစ်တော့
ရော မုန်းစရာမှ မဟုတ်တာ။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ပင်လျင် အိန္ဒိယ လူမျိုးပဲ။ ထားပါတော့ အကုန်လိုက် စဉ်းစားကြည့်တယ်။ မူဆလင်တွေက မြန်မာတွေကို ထိခိုက်အောင် ဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲ။ ကျနော်တို့ဆိုရင် မြန်မာ-အိန္ဒိယ ကပြားပေမယ့် မိဘတွေကစ မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြန်မာနိုင်ငံသားလို့ ခံယူတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ချစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက်တာ မြင်ချင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ သာယာဝပြောဖို့ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားဖို့ ဘက်ပေါင်းစုံက ကြီုးစားခဲ့တယ်။
အဲတော့ ဘာလို့ မူဆလင်မုန်းသလဲ။ စဉ်းစားကြည့်ရင် အာဏာရှင် အစိုးရ အဆက်ဆက်က သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့ ဝါဒမှိုင်းတွေကြောင့်ပါပဲ။ ကြားဖူးပါတယ် စာရွက်တွေ ဖြန့်တယ်။ ဒီခေတ်မှာ email တွေပို့တယ်။ ရေးထားတာတွေက…. မူဆလင်ယောက်ျားတွေက မြန်မာမိန်းကလေးယူပြီး အစ္စလမ် ဘာသာဝင်ခိုင်းရမယ်တဲ့။ အထူးသဖြင့် ဆရာမတို့ ဆရာဝန်မတို့ ယူရင် ပိုက်ဆံတောင် ဆုချတယ်တဲ့။ နောက်ဇာတ်နာအောင်ရေးသေးတယ် ဘယ်က ဗမာမိန်းကလေးဆို မူဆလင်နဲ့ယူပြီး အိမ်မှာ နှိပ်စက်ပြီး အလုပ်ခိုင်းတယ်ဘာညာနဲ့။ စုံနေတာပဲ။ စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတာက လူတွေကလည်း ယုံတယ်။ အမှန်မှာက မူဆလင်တစ်ယောက်ဟာ ဘာသာခြားနဲ့ကို ယူခွင့်ကိုမရှိတာပါ။ ဒါပေမယ့် ချစ်ကြလွန်းလို့ ယူကြပြီဆိုရင် တစ်ချို့လည်း နှစ်ယောက်လုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သွားကြတာ ရှိသလို မူဆလင် ဖြစ်သွားကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါသူတို့ရဲ့ လွပ်လပ်ခွင့်နဲ့ သူတို့ ပြောင်းတာ။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်ရှေ့မှာ မြင်ဘူးသလောက်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သွားကြတာတောင် များနေသေးတယ်။
နောက်တစ်ချို့က ပြောနေကြတဲ့ မူဆလင်တွေက ဗမာဆိုင်မှာ မဝယ်ဘူးတဲ့။ လုံးဝ လုံးဝကို မှားပါတယ်။ ကျနော် အခုချက်ချင်း စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်။ ကျနော် နိစ္စဓူဝ ဈေးဝယ်နေတာ မူဆလင်ဆိုင်တစ်ခုမှကို မပါဘူး။ အားလုံး ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရောင်းတဲ့ ဆိုင်ချည်းပဲ။ တစ်ခုပဲရှိတယ် ကြက်သားဝယ်ရင်တော့ မူဆလင်ရောင်းတဲ့ ဟာလာလ်သားမှ စားလို့ရတယ်။ ဒါက ဟာလာလ်သားဆိုတာ တရားတော်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့နည်း နောက် ဘုရားစာဆိုပြီး မှ အသားပေါ်ရတယ်။ (Avatar ရုပ်ရှင်ထဲမှာတောင် ဒီသဘောမျိုးပါတယ်။) ကဲ ရှင်းပြီနော်။ တလွဲဆံပင်ကောင်းပြီး မတွေးကြပါနဲ့ဗျာ။
မူဆလင်တွေက မြန်မာနိုင်ငံကို ဘယ်လိုချစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ပြောပြအုံးမယ်။ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေထဲက ဦးရာဇတ်။ နောက်ရဲဘော်ကိုထွေး။ ဦးရာဇတ်ဆို အထူးရေးပြစရာတောင်မလိုဘူး မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် ရှင်သန်ထက်မြက်ရေး လုပ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားကျောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီး။ ဗိုလ်ချုပ်တို့ လေးစားတဲ့ ဆရာကြီး။ လွပ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းရင်း ကျဆုံးခဲ့တယ်။ နောက် အင်္ဂလိပ်အစိုးရကို ရဲရဲတောက် ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင် ကိုရာရှစ်။ ဒါတွေက လွပ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလ။ ပြီးတော့ ဒီခေတ်မှာ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်မှူးဘသော် (သို့) စာရေးဆရာ မောင်သော်က။ ဆရာ မောင်သော်ကဆိုရင် စစ်အဏာရှင်က ထောင်ချထားတုန်း ထောင်တွင်း အစာငတ်ခံတိုက်ပွဲမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။ မန္တလေး NLD ခေါင်းဆောင် ဒေါ်ဝင်းမြမြ ဆိုရင် စီးပွားရေးတွေ ဆုံးရှုံးတဲ့ထိ ပေးဆပ်ခဲ့တယ်။ ထောင်တွေကျခဲ့တယ်။ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေထဲက ကိုမြအေး။ ထောင်ဒါဏ်နှစ်ရှည်တွေကျခံပြီး ကိုမင်းကိုနိုင်တို့နဲ့ အတူ တော်လှန်ရေးကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ခဲ့တယ်။ မြန်မာ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေး သမိုင်းစာအုပ် ပြုစုလို့ု ထောင်ကျခဲ့ရသူ ကိုအောင်ထွန်း။ နောက်ပြီး မထင်ရှား သူတွေ အများကြီး။ မူဆလင်တွေ နိုင်ငံရေးနဲ့ ထောင်ကျရင် ပိုပြီးနှိပ်စက်ဆဲဆိုခံရ တယ်တဲ့။ ABSDF မှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ ABSDF-AB ကကိစ္စတွေ ကြားဖူးရင် သိကြမှာပါ။ ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့နဲ့ အတူ ပေးဆပ်ခဲ့ကြသူတွေ ထဲမှာလည်း မူဆလင်တွေ ပါတယ်။
အဲ့ဒါပါပဲ။ စဉ်းစားကြည့်ရင် မူဆလင် မုန်းစရာ ဘာအကြောင်းမှ မရှိဘူး။ အသားလွတ်ကိုမုန်းတာဗျ။ ပြောရရင်ဗျာ မူဆလင်တွေထဲမှာလည်း မကောင်းတဲ့လူရှိမှာပေါ့။ ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ထဲမှာလည်း မကောင်းတဲ့လူတွေ ရှိတာပဲ။ ဥပမာဗျာ မူဆလင်လူဆိုးတစ်ယောက်က မုဒိန်းမှူ ကျုးလွန်တယ် ဆိုပါတော့။ ပြောကြပြီလေ။ “ဟဲ့… ကုလားတစ်ယောက်က ဗမာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို မုဒိန်းကျင့်သတဲ့။ ကုလားတွေ @$!*#!!!….” ပြောကြရောဗျာ။ အမှန်ဆို မှူခင်းဂျာနယ်လိုမျိုး ဖတ်ကြည့်ပါလား။ မုဒိန်းမှူ ကျုးလွန်သူ ဗမာ ဘယ်နှစ်ယောက်။ ကုလားဘယ်နှစ်ယောက်။ statistic ချကြည့်ပေါ့။ ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူဆိုးက မုဒိန်းကျင့်ရင် “ဟဲ့… ဗမာတစ်ယောက်က ဗမာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို မုဒိန်းကျင့်သတဲ့။ ဗမာတွေ @$!*#!!!….” ဆိုပြီး ပြောကြလို့လား။ အဲ့ဒါပါ။ သိမ်းကြုံးပြီး အပြစ်မမြင်ပါနဲ့လို့ ပြောချင်တာ။ မူဆလင်တွေမှာလည်း လူဆိုးတွေ ရှိမှာပဲ။ တကယ်တော့ ဒီလူဆိုးတွေဟာ တရားတော်ကို မလိုက်နာတဲ့ မူဆလင်မစစ်တဲ့ လူတွေလို့တောင် ပြောလို့ ရပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက နိုင်ငံအနေနဲ့ အိန္ဒိယကိုများ မုန်းတာလားလို့ စဉ်းစားမိတယ်။ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့ဆို ဒီမှာမွေးတာ မျိုးဆက် သုံးဆက်လောက်ကတည်းကပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲ ချစ်ကြတာပဲ။ မန္တလေးမှာ ပြည်ကြီးက မနေ့တနေ့ကမှ ဝင်လာ လဝကကို လဘ်ထိုးပြီး နိုင်ငံသားကဒ်ကိုင်ထားပြီး မြန်မာစကား မပြောတဲ့ လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ လူတွေက ဘယ်လောက်တလွဲ ဆံပင်ကောင်းလဲ ဆိုတော့ ရီရတယ်။ ဟိုတလောက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ ရေပိုင်နက်ကိစ္စမှာ တကယ်တော့ မြန်မာက နိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ ၊ဧရိယာတွေ ရလိုက်တာ အဆင်ပြေရက်နဲ့ ဘယ်သူက ဖွလိုက်လဲမသိ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက နိုင်သွားတယ်ဆိုပြီး မဆီမဆိုင် “ဟေ့ မနက်ဖန် ကျောင်းမှာ ကုလားတွေကို ဆဲမယ်…” ဘာညာ ပြေတဲ့သူကပြော။ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ အဲလိုသာ တွေးခေါ်မယ်ဆိုရင် တရုပ်နိုင်ငံလို မြန်မာ့ သယံဇာတရော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရော အကုန် တစစီ ဖဲ့ယူသွားတာရော ဆိုရင် ပြည်တွင်းက တရုပ်တွေ ဘယ်သွားပုန်းရမှန်းသိမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဒီ racismကို ထပ်ပြောရရင်တော့ ကမ္ဘာမှာ အင်မတန် စိတ်ဓါတ် အောက်တန်းကျတဲ့ အပြုအမူအမြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ အင်္ဂလန်လို နိုင်ငံမျိုးမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၃၀လောက်ကဆို racist အရမ်းများတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုတော့ သူတို့ရဲ့ civilization တိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ racism ဆိုတာ ရှက်စရာ ရွံမုန်းစရာ အဖြစ် မြင်လာကြပါပြီ။ racism ဆိုတာ တနည်းပြောရရင် အတွေးအမြင် ကျဉ်းမြောင်းခြင်း (narrow minded) ပါပဲ။ ကျနော်တို့ဟာ ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ် open minded ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာပေးရရင်… ကျနော်တို့လို အရင်ခေတ်က Rock music ကို နားထောင်ခဲ့တဲ့ အရွယ်တွေဟာ Hiphop music ကို မကြိုက်ဘူး။ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ Hiphop တဲ့… ဒါလားကွာ music လို့ ရှုံ့ချနေမယ့်အစား။ ဪ… သူတို့ခေတ်နဲ့ သူတို့ ဂီတပဲလို့ တွေးပေးပြီး open minded ဖြစ်ပေးရမှာပေါ့။ (ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ rock ကိုယ်နားထောင်၊ သူများကြိုက်တဲ့ Hiphop ကိုလည်း မရှုပ်ချပါဘူးပေါ့။ ) ထားပါတော့… open mindedကို အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာပေးကြည့်တာပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ အားလုံးအနေနဲ့ လောကပါလတရား သုံးပါးဖြစ်တဲ့ တရားမျှတခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်း၊ တ်း တန်းတူညီ မျှခြင်းဆိုတဲ့ အချက်သုံးပါကို လက်ကိုင်ထားကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးတရားမျှတခြင်းကို မြတ်နိုးလာကြပါစေ။ လွတ်လပ်ခြင်းကို မြှင့်တင်ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေ။ တန်းတူညီ မျှခြင်း ကို အမြဲ နှလုံးသွင်းပြီး လူလူချင်း နှိပ်စက်ခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေ။
Labels: Burma, commentary, justice, Myanmar, Thoughts, truth